Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya Africa na-aga n'ihu: Ugbu a na Rwanda
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • nzukọ • News • Akụkọ na -agbasa na Rwanda • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ihe omume njem nlegharị anya nke Rwanda
Ọtụtụ mba Africa na-eteta maka akụkọ na-agbawa obi nke ụfọdụ mba na-emechi njem na mba Africa ụfọdụ n'ihi mmụba nke ụdị COVID-19 ọhụrụ.
Ihe Africa chọrọ bụ ileba anya nke ọma wee jikọta mkpebi ya kpamkpam wee wulite usoro nketa ya na mgbake n'ime na n'etiti onwe ha site na iji njem nlegharị anya dị ka ngalaba na-akpali akpali iji jikọta mbọ mba niile na-aga n'ihu na-emebi mbibi nke coronavirus na. ụdịdị ya na-adịte aka nke na-eto ruo taa.
N'agbanyeghị akụkọ siri ike n'ihi na ụdị coronavirus ọhụrụ akpọrọ B.1.1.529, enwere obi ụtọ na emume Rwanda dịka ndị ndu njem nlegharị anya nwetara otuto na ekele maka ọrụ ha na-arụ maka mgbake mgbake nke ụlọ ọrụ njem.
Tọrọ ntọala na 2018, African Tourism Board (ATB) bụ otu mba ụwa na-asọpụrụ maka ime ihe dị ka ihe na-akpali akpali maka mmepe nke njem na njem nlegharị anya na, site na na n'ime mpaghara Africa. Ndị otu ahụ na-enye ndị otu ya nkwado akwadoro, nyocha nghọta, na mmemme ọhụrụ. Na mmekorita ya na ndị otu onwe na nke ọha, Board Tourism Board na-akwalite uto, uru, na ịdịmma njem na njem nlegharị anya n'Africa. Ndị otu ahụ na-enye nduzi na ndụmọdụ n'otu n'otu na mkpokọta ndị otu ya. ATB na-agbasawanye na ohere maka ire ahịa, mmekọrịta ọha na eze, itinye ego, ntinye aha, ịkwalite, na ịmepụta niche ahịa. Maka ozi ndị ọzọ, pịa ebe a.